हामीले बनाउन त बनायौं तर भेन्टिलेटरभन्दा बढी मन्त्री र हस्पिटलभन्दा बढी सांसद बनायौं – हिमालयन ट्रिबुन
प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको अपहेलना मुद्दामा कारबाही गर्न बारका पूर्वअध्यक्षहरुको माग
२०७७ माघ ११, आईतवार १०:१९
प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री राईको विवाह समारोह(फोटोफिचर)
२०७७ माघ ११, आईतवार ०९:३९
२०७७ बैशाख ७, आईतवार १५:३०
हामीले बनाउन त बनायौं तर भेन्टिलेटरभन्दा बढी मन्त्री र हस्पिटलभन्दा बढी सांसद बनायौं
HT २०७७ बैशाख ७, आईतवार १५:३०
नेपालमा सरूवा रोगका लागि सुविधासम्पन्न ल्याबसहितको छुट्टै विशेषज्ञ अस्पताल चाहिन्छ भन्ने ज्ञान राणा शासनमैं आइसकेको रहेछ ।
सड़कहरू नबन्दै हेटौँडाबाट काठमाडौंसम्म सामान ढुवानी गर्न ४० किलोमिटर लामो ‘रोप-वे’ बनिसकेको रहेछ ।
अहिले पनि रेल धेरैलाई सपनाजस्तै लाग्छ, तर जनकपुरमा हाम्रो अग्रज पुस्ताले रेल चढ़िसकेको रहेछ ।
अहिले विश्वभर विद्युतीय सवारी र यातायातबारे बल्ल चेतनाले अभियानको रूप लिँदै छ तर हाम्रो राजधानीमा दशकौँ अघि नै विद्युतीय ट्रली बस शानसित गुडेका रहेछन् ।
राजमार्ग, निकुञ्ज, रङ्गशाला, प्रदर्शनी स्थल, सांस्कृतिक संस्थान, नास्ट, प्रज्ञाप्रतिष्ठान, गौचरन, एअरपोर्ट र हस्पिटलजस्ता देशका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार धेरै अघि बनेका रहेछन् । इतिहास पढ्दै गर्दा मज्जा आउने भनेको त्यस्तो अभावको समयमा पनि थालेका धेरै जसो योजना समयमैं पूरा हुने रहेछन् ।
देशमा साइन्स क्याम्पस खुलेको पनि सय वर्षभन्दा बढ़ी भएछ । चिकित्सा, वनविज्ञान र इन्जिनियरिङ् संस्थान पनि पुरानै रहेछन् । अन्य कुरा त छोडौं, अहिले लकडाउनका लागि पनि दशकौं अघिको कानुन उपयोगी भएको छ ।
समग्रमा देश पहिले स्वर्ग थियो या आजभन्दा धेरै विकसित थियो भन्ने होइन, तर विकास के हो भन्ने ज्ञान हामीलाई धेरै अघि थाहा रहेछ । हामी आँखा खोलेर पनि फेरि निदाएका रहेछौं । बाँकी विश्वसँगै हामीले पनि हिँड्न सुरु गरेका त रहेछौं तर शायद हाम्रो गति साह्रै सुस्त भयो ।
यो सुस्त गतिका लागि हाम्रो पुस्ताले आफूलाई समीक्षा गर्नुभन्दा, सुधार गर्नुभन्दा अघिल्लो पुस्तालाई दोषारोपण गर्ने संस्कृति कहाँबाट विकास भयो कुन्नि ? शायद सजिलोका लागि पनि होला । किनकि अब अघिल्लो पुस्ता प्रतिवाद गर्न त पक्कै आउन्न । विश्वभर इतिहासको सम्मान र गौरवबोध हुन्छ, अघिल्लो पुस्ताले हासिल गरेका उपलब्धिको चर्चा हुन्छ । आजको विकास पक्कै आजकै मात्र जगमा भएको हुँदैन । इतिहास त परको कुरो भयो, हामी त एकअर्कालाई पनि स्वीकार नगर्ने निषेधमुखी अभ्यासमा बाँचिरहेका छौं ।
हो हामीकहाँ विभेद थियो, अशिक्षा थियो, गरिबी, शोषण र दमन थियो । तानाशाही शासन थियो । समाज विसङ्गतिपूर्ण थियो । तर यी सबै समस्या विश्वभर थिए । कतै मान्छेलाई सिक्रीमा बाँधेर किनबेच गरिने दासप्रथा थियो, कहीँ महिलालाई मत हाल्ने अधिकार थिएन । कहीँ जारहरूको दमन थियो भने कहीँ फिरङ्गीको उपनिवेश । तर आज सबैले तरक्की गरिरहेकै छन् । हामीकहाँ जहानियाँ शासनलाई प्रजातन्त्रले पराजित गर्दासम्म विश्वका धेरै देश तानाशाहीमैं थिए ।
शायद त्यहाँ राजनैतिक परिवर्तन र आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण सँगसँगै अघि बढ्यो । हामी राजनीतिमैं अल्झियौं । हामीले प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र बनायौं । आन्दोलनहरूलाई महान् जन-आन्दोलन बनायौं । विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनायौं । राजनीतिमा गर्न सकिने जति प्रगति हासिल गऱ्यौं । यहाँसम्म कि एक लेनको राजमार्गमा अर्को लेन थप्न नसके पनि नामचाहिँ राजमार्गबाट लोकमार्ग थपिदियौं । भेन्टिलेटरभन्दा बढ़ी मन्त्री र हस्पिटलभन्दा बढ़ी सांसद पनि बनायौं । अरू देशका प्रदेशभन्दा देश सानो थियो । र, पनि सातवटा प्रदेश बनायौं । फल के मिल्यो भने, हिजो एकअर्कालाई जोड्न पुल बनाएका थियौं, आज आफ्नै देशका नागरिकलाई रोक्न पुलमा बार बनायौं ।
निराशा लाग्दो त के भने, अहिले पनि हामी राजनीतिमैं छौं । अबको दश वर्षमा हामीले ‘राजनीति’को ‘राज’लाई झिकेर ‘लोक’ थप्नेछौं र अर्को दश वर्ष त्यसैलाई महान् उप्लब्धिका रूपमा देखाउनेछौं । हामी बास्तवमैं महान् छौं ।
Spread the loveकाठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय संयन्त्र गठनको माग औचित्यहीन भएको बताएका छन् । नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी संचारमाध्यमलाई दिएको अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्रीले यो लोकप्रिय हुन वा गरेको देखाउन पाइनँ भन्ने अनाधिकृत र कुण्ठाग्रस्त मानसिकता मात्रै भएको र यस्ता कुराहरुको कुनै अर्थ भएको बताएका हुन् । उनले भने, ‘अब […]
२०७७ आश्विन २०, मंगलवार १६:३३
ईण्डो-पश्चिमा साम्राज्यवादको संघीयता प्रयोग
२०७७ मंसिर ३, बुधबार १०:११
नेकपाको घर झगडा, राष्ट्रिय राजनीति र सरकार संचालन
२०७७ बैशाख १३, शनिबार १३:२६
शेरबहादुर तामाङको मनले के सोच्दै होला यो बेला ?
२०७७ पुष ११, शनिबार ११:१४
कुनै जादू भएन भने सर्वोच्चले संसद विघटनलाई सदर गर्नेछ !
२०७७ बैशाख १८, बिहीबार ११:५३
बेइजिङ-काठमाडौं चल्ने चुच्चे रेल, घरघरमा पाइपबाट आउने ग्यासका लागि पो दिएको बहुमत !
२०७७ असार १५, सोमबार ११:१५
‘लड्ने र उत्पादन गर्ने दुबै थरीको नेतृत्व सेनाले २० बर्षसम्म गर्नुपर्छ’
अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा पुराना वामपन्थी नेता काजी बाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण
ट्रम्पविरुद्धको महाभियोग सिनेटमा
चार सय रुपैयाँले उकालो लाग्यो सुनको मूल्य
विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट २१ लाख ४९ हजार भन्दा बढीको मृत्यु